घर छाडेर शहर र विदेश बस्नेहरूको गणना कसरी हुन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो) « News24 : Premium News Channel
घर छाडेर शहर र विदेश बस्नेहरूको गणना कसरी हुन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं । ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि नेपालको १२औं राष्ट्रिय जनगणना शुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवरण संकलन गरेर जनगणनाको शुभारम्भ गरिएको हो ।
जनगणनाका लागि मुलुकभर ४० हजार गणक र ८ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक खटाइएको छ । गणकहरु फिल्डमा गएर खटिने र उनीहरुलाई सुपरिवेक्षकले सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ ।
गणकले हरेक घर तथा परिवारमा औसत २० मिनेट लगाउने र बढीमा ३० मिनेट लाग्नेगरी प्रश्न तयार गरिएको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । प्रश्नका उत्तरहरु गोप्य रहने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जो जुन भूलोगमा बसेको छन्, उसको त्यहीँ गणना हुने प्रवक्ता लामिछानेले बताउनुभयो । न्युज २४ नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जो जुन भूगोलमा बस्नुहुन्छ, त्यहीँ भुगोलको आधारमा गणना हुन्छ । अक्सर परिवेशको एउटा परिभाषा छ हाम्रो, त्यो अक्सर परिभाषाले के भन्छ भने एउटै घरमुनि, छानामुनि बस्ने परिवारको व्यक्तिहरुको समूहलाई परिवार भन्छौँ । त्यो परिवारको एउटा गणना हुन्छ । हजुरबुबा, हजुरआमादेखि छुट्टीएर बसेका दाजुभाइलाई हामी परिवार भनेर बुझ्छौँ तर जनगणनामा त्यो परिवार भनेको फरक छ । यहाँ चाहिँ परिवार भनेको नाता पर्ने र नाता नपर्ने पनि हुन सक्छन् । एउटै छानामुनि बस्ने व्यक्तिहरुको समूह हो परिवार ।’
पढ्नका लागि गाउँबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरुको गणना काठमाडौंमै हुने उहाँले बताउनुभयो । रोजगारीको शिलशिलामा देशका विभिन्न ठाउँ पुगेका कर्मचारीहरुको गणना पनि त्यहीँ हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीहरु कुनै ठाउँबाट काठमाडौं आएर भाडामा बसेका छन् । भाडामा बसेको भएपनि ती कर्मचारीहरुको गणना यहाँबाटै हुन्छ । उनीहरुको परिवार जाहाँ बसेका छन्, त्यहीँबाट हुन्छ । विद्यार्थीको हकमा पनि त्यहीँ हो । विद्यार्थीहरु देशका जुनसुकै ठाउँबाट काठमाडौं आएर बसेपछि उनीहरुको अक्सर बसोबास काठमाडौं हुन्छ । त्यसैको उनीहरुको गणना काठमाडौंमै हुन्छ ।’
रोजगारीको लागि विदेशको गएकाहरुको ‘अुपस्थित गणना’ हुने प्रवक्ता लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरुको चाहिँ अनुपस्थित गणना भनेर अलग्गै राखेका छौँ । नेपालबाट कति जना विदेश जानुभएको छ ? उनीहरु विदेश जाँदाको उमेर कति थियो ? शैशिक अवस्था कस्तो थियो ? कुन देश जानुभएको छ ? के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने सपूर्ण विवरणको आधारमा अनुपस्थित भनेर गणना गर्नेछौँ ।’
बाकीँ भिडियोमा हेर्नुहोस्